Tag: rank brain | Martech Zone
Tag: ogo ụbụrụ
Kedu ihe bụ Google RankBrain?
Monday, August 15, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Okwu, ebumnuche, na asụsụ okike ma ọ bụ ndị na - egbochi ajụjụ dị mfe nke isiokwu. Asụsụ anaghị adị mfe nghọta, yabụ ọ bụrụ n ’ibido idobe usoro ikwu okwu ma tinye akara ngosi maka ịchọpụta amụma, ị nwere ike ịbawanye izi ezi nke nsonaazụ. Google na - eji ọgụgụ isi (AI) eme ihe nke ahụ bụ Google RankBrain? RankBrain bụ ọganihu na teknụzụ ọchụchọ Google na-etinye nhazi asụsụ okike na ọgụgụ isi iji mee ka eziokwu ahụ dịkwuo elu